आधुनिक डिजाइनमा बनेको लोकल चियाभट्टी (भिडिओ) :: Setopati
आधुनिक डिजाइनमा बनेको लोकल चियाभट्टी (भिडिओ)
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, माघ २०
सुसन चौधरी काठमाडौं, माघ २०
सामाजिक सञ्जालमा अहिले 'द चिया स्पट' चर्चामा छ। हुनलाई यो चिया पसल हो तर केही फरक वातावरण भएकाले मान्छेको भिड बढ्दै गएको छ।
ललितपुर, कुमारीपाटीस्थित द चिया स्पटको मिठो चिया र सुन्दर वातावरणको चर्चा बढिरहेका बेला यसबारे बुझ्न हामी पनि पुग्यौं।
भारतको राजस्थानी कलासँग मिल्दोजुल्दो डिजाइनले सजिएको द चिया स्पटको माहोल हामीले देखिरहेका रेस्टुरेन्ट वा क्याफेभन्दा फरक छ। भुइँमा ओछ्याइएका गलैंचा, चकटी, आडेस लाग्न राखिएका कुसन, साना झुल्ने पिङ, ठूला तामाको थालीबाट बनेका टेबल, चिटिक्क परेका खटिया र त्यसमाथि राखिएका रंगीन बुट्टे कपडाको सजावटले यो ठाउँ सुन्दर देखिन्छ। अझ भित्तामा टाँगिएका कलात्मक ऐनाले बेग्लै सुन्दरता थपेको छ।
यहाँ आउने ग्राहकले भुँइमा पलेँटी कसेर वा पिङमा झुल्दै रमाएर रंगीचंगी कपडाले बेरिएको सिसाको कपमा चियाको चुस्की लिँदै गफिन सक्छन्।
'धेरैले यहाँको डिजाइन भारत, राजस्थानको कलासँग मिल्दोजुल्दो छ भन्नुहुन्छ,' द चिया स्पटका सञ्चालकद्वय रूचि कर्माचार्य र गौतम गुभाजू भन्छन्, 'हामी भारत घुम्दा त्यहाँको कलाबाट केही प्रभावित भयौं होला। तर हामीले त्यो सोच लिएर भने डिजाइन गरेका थिएनौं।'
रूचिका अनुसार द चिया स्पटको डिजाइनमा उनकी दिदीको सुझाव मिसिएको छ। रूचिकी दिदी न्यूयोर्क गएका बेला त्यहाँ एउटा क्याफेमा यस्तै डिजाइन देखिछन्। उनकै सुझावअनुसार उनीहरूले यहाँ डिजाइन गरेका हुन्। त्यसैले द चिया स्पटलाई सञ्चालकद्वय आधुनिक डिजाइनमा बनेको लोकल चियाभट्टी भन्न रूचाउँछन्।
यहाँको फरक वातावरणले ग्राहक आकर्षित गरेको छ नै, त्योसँगै यहाँ पाइने चिया पनि स्वादिलो छ। मुख्यगरी चार स्वादमा पाइने चियामध्ये छोटु चिया धेरैले मन पराउने उनीहरूले बताए।
धेरैले सोध्छन्, 'छोटु चिया नाम किन राखियो?'
उनीहरूले यसको कारण सुनाए।
द चिया स्पट सञ्चालकहरू रूचि कर्माचार्य र गौतम गुभाजू।
सन् २०१९ मा गौतम र रूचि दिल्ली गएका थिए। चियापारखी यी दुवैलाई चियाको तलतल भयो। सडकछेउको गाडामा एक बालक चिया बेचिरहेका थिए जहाँ मान्छेको भिड थियो। त्यो चिया गौतम र रूचिको पनि जिब्रोमा बस्यो।
'चिया साह्रै मिठो थियो। एक कप चियाका लागि पन्ध्र-बीस मिनेट कुर्नुपरेको थियो,' रूचि र गौतम भन्छन्, 'हामीले त्यो चिया बनाउने तरिका नसोधी बस्न सकेनौं। ती बालकले पनि अप्ठ्यारो नमानी हामीलाई सबै जानकारी दिए।'
आफूले खाएको त्यति मिठो चिया नेपालका चियापारखीलाई पनि चिनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। अनि द चिया स्पट खोलेसँगै तिनै बालकको नाममा राखेका हुन् छोटु चिया।
'यो चिया छोटुले बनाउने तरिकाअनुसार नै बनाइन्छ,' रूचिले भनिन्।
गौतमका अनुसार छोटु चियामा पाँच–छ वटा मसला प्रयोग हुन्छ। चियामा स्थानीय स्वाद ल्याउन सबै मसला उनीहरू आफैं पिस्छन्।
उनी भन्छन्, 'छोटुको चिया यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले उनलाई भेट्न पाएको छैन। फेरि एकपटक उनलाई भेटेर हाम्रो द चिया स्पटबारे सुनाउन मन छ।'
छोटु चियासँगै यहाँ तन्दुरी चिया र चकलेट चिया पनि चर्चित छ। त्यसबाहेक ग्राहकको मागअनुसार मसला चिया पनि पाइन्छ। छोटु चियाको मूल्य एक सय रूपैयाँ, तन्दुरी चिया र चकलेट चियाको एक सय पचास र मसला चियाको असी रूपैयाँ पर्छ।
चियासँगै 'स्न्याक्स' का रूपमा खान यहाँ घरमै बनाइएका ताजा सेलरोटी, आलु, चिकेन समोसा, भेज समोसा, चिप्स पनि पाइने रूचिले जानकारी दिइन्। अधिकांश खाजा उनकी आमाले पकाउने हुन्। सबै परिकारमा स्थानीय स्वाद पाइने उनको दावी छ।
उनका अनुसार ग्राहकले द चिया स्पटको परिकारमध्ये चिकेन समोसा धेरै मनपराउँछन्। हालै उनीहरूले चियासँग खान बेकरी परिकार पनि थपेका छन्।
रूचि र गौतम कलेजदेखिकै मिल्ने साथी हुन्। लामो समयदेखिको चिनजान भएकैले उनीहरूले नयाँ व्यवसाय सँगै गर्ने निधो गरेर लकडाउन सकिएको केही समयपछि द चिया स्पट सुरू गरेका हुन्।
गौतमको आफ्नै कपडा व्यवसाय पनि छ। बैंकमा काम गर्ने रूचि दिनभरको काम सकाएर साँझ द चिया स्पट सम्हाल्न आउँछिन्।
'जागिर खाइरहे पनि हामीलाई आफ्नै व्यवसाय गर्न मन थियो। के गर्ने भनेर आइडिया भने थिएन। छोटुले गर्दा यो काम गर्न ठूलो प्रेरणा मिल्यो,' रूचि भन्छिन्, 'यता चिया व्यवसाय गरे पनि हामी आफ्नो जागिरमा रमाइरहेका छौं। तर चियासँग जोडिएका भावनाले होला यही धेरै प्यारो छ।'
रेस्टुरेन्ट र क्याफे कसरी चल्छ भन्नेबारे केही जानकारी नहुँदा सुरूमा त उनीहरूलाई डर लागेको थियो। तर नयाँ अनुभव बटुल्न उनीहरूले आँट देखाए।
'काठमाडौंमा चिया पसल र क्याफे थुप्रै छन्। यस्तो बेला हाम्रो व्यवसाय राम्रो होला-नहोला, मनमा प्रश्न उठेको थियो,' गौतम भन्छन्, 'सुरूमा सानो ठाउँ लिएर खोल्यौं। तर कम समयमै ग्राहक ह्वात्तै बढे। एकपटक त भिड सम्हाल्न पनि गाह्रो पर्‍यो।'
उनले थपे, 'सामाजिक सञ्जालमा द चिया स्पटको चर्चा बढेको रहेछ। हामीलाई एकजना साथीले भनेपछि मात्र थाहा पायौं। सबैले हाम्रो चिया र ठाउँ मन पराइदिनुभयो, खुसी लागेको छ।'
द चिया स्पटले अहिले ठाउँ फराक बनाएर कर्मचारी पनि थपेको उनले जानकारी दिए।
गौतम र रूचिका अनुसार द चिया स्पटमा ग्राहकले विशेष मनपराउने यहाँको वातावरण र छोटु चिया नै हो। विस्तारै अरू देश पनि घुमेर नयाँ चिया ल्याउने सोचमा रहेको उनीहरूले बताए।
'संसारभर कति स्वादका चिया होलान्! हामीलाई यसबारे धेरै जान्नु छ र विभिन्न स्वादका चिया नेपालमा चिनाउनु छ,' उनीहरू भन्छन्, 'हामी दुवै यो व्यवसायमा नयाँ छौं। धेरै सिक्न बाँकी छ। ग्राहकको मन जित्नु पनि छ।'
द चिया स्पट र यहाँको चियाका विशेषताबारे कुराकानी हेर्नुस् भिडिओ ब्लगमाः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७, ०७:१५:००